बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने आशमा बढ्न थाल्यो शेयर मूल्य, बुधवार कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिने आशमा बढ्न थाल्यो शेयर मूल्य, बुधवार कुन कम्पनीको भयो सर्वाधिक कारोबार ?
on: May 22, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
जेठ ८, काठमाडौं (अस) । बुधवारको कारोबारमा जलविद्युत् समूहको परिसूचक ५ दशमलव ४४ प्रतिशत र होटल समूहको ७ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से ६ दशमलव ५१ अंकले बढेर १ हजार ३१८ दशमलव ६४ विन्दुमा पुगेको छ । ११ समूहको परिसूचकमा उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत बढेको छ ।
यस दिन लगानीकर्ताहरु जलविद्युत र होटल समूहको शेयरमा आकर्षित भएका छन् । १ हजार ३१४ दशमलव ८० विन्दुबाट शूरु भएको परिसूचक सवा घण्टामा १ हजार ३२२ दशमलव ३८ विन्दुसम्म पुगेको थियो । कारोबारको समय अवधिसम्म बढेको बजारमा आठ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट लाग्न खोजेको छ । प्रायः सबै जलविद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य उच्चले बढेको छ । कारोबारको शुरुमै अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरमा बढेर सर्किट लागेको थियो । आउँदो बजेटमा जलविद्युत् कम्पनीहरुको बारेमा सम्बोधन हुने आशामा सो समूहको परिसूचक बढेको एक लगानीकर्ताले बताए ।
बुधवार रू. ९६ करोड ६६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम १८ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ४८ अंकले बढेर २ सय ८१ दशमलव २७ विन्दुमा पुगेको छ ।
किन लाग्न खोज्यो आठ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट
बुधवार आठ कम्पनीको शेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य १० प्रतिशत, अपर तामाकोशी, अरुण कावेली पावर, रैराङ जलविद्युत विकास, हिमालयन पावर पार्टनर, अपि पावर कम्पनी, मल्टीपर्पस फाइनान्स र सिटि एक्सप्रेस फाइनान्सको शेयर मूल्यमा सर्किट लाग्न खोजेको हो । त्यस्तै, घलेम्दी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ दशमलव ४८ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १०५ पुगेको छ ।
मल्टीपर्पस फाइनान्स कम्पनीले १ बराबर ८ दशमलव ६४ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नको लागि सेबोनले अनुमति दिएसँगै कम्पनीको शेयर सर्किट लागेको हो । दोस्रोमा अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको आयोजना निर्माण सम्बन्धी हल्लाले कम्पनीको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. ३०५ पुगेको छ । शिवम् सिमेण्टको शेयर मूल्यमा गत दिनहरुमा आएको उतारचढाव जस्तै अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयरमा पनि उतारचढाव आएको छ ।
नेपाल बैंकको सर्वाधिक कारोबार
बुधवार नेपाल बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको रू. ६ करोड ९६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ३४३ पुगेको छ । दोस्रोमा प्राइम कमर्शियल बैंकको रू. ६ करोड ३७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ३७० पुगेको छ । कम्पनीको १६ प्रतिशत बोनस शेयर बुधवारसम्म शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुले पाउने भएकाले शेयर कारोबार बढेको हो । यस दिन कारोबार भएका १७१ कम्पनीमा ९७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५७ कम्पनीको घटेको छ । साथै, १७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।